Ségou Villages: Ny Fahendren’ireo Ohabolana Bambara · Global Voices teny Malagasy
Ségou Villages: Ny Fahendren'ireo Ohabolana Bambara
Voadika ny 31 Oktobra 2011 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, македонски, English
Betsaka ny fahendrena hita any anatin'ireo ohabolana nentin-drazan-dry zareo Bambara, zavatra iray izay ifampizaran'ilay bilaogera Oumar Dembélé ao amin'ny Ségou Infos Blog [fr], avy amin'ny tetikasa fampifandraisana ireo vohitra any Ségou tohanan'ny Rising Voices :
Si le veau ne reconnait pas le lion comme animal féroce, la vache le sait bien.
Raha tsy mandray ny liona ho biby masiaka ny zanak'omby, ny omby vavy kosa mahafantatra tsara mihitsy.
Io ohabolana tanisaina etsy ambony io izay mitory ny fahendren'ireo biby efa ela nihetezana io dia hita hatrany ampahaterahan'ny fiteny Bambara, izay sady tenim-pirenena ao Mali rahateo. Bambara ihany koa moa no teny be mpahazo indrindra manerana ny firenena, antsoiny hoe lingua franca. Ny fanoratra ny teny Bambara dia nanomboka nandritra ny fanjanahana nataon'ny Frantsay ary ny fampianarana mamaky teny sy manoratra dia tena mbola voafetra tokoa. Namela dindo betsaka teo amin'ilay teny ny Frantsay, ary ny kely indrindra amin'ny fahalalàna ny teny Frantsay dia efa ampy hitadidiana ny voambolana. Raha tsy mahatadidy voambolana ianao dia afaka manandrana mampiasa voambolana Frantsay.
Ny ohabolana dia manampy hahatakatra kolontsaina na sivilizasiona iray, ary betsaka ny ohabolana fanta-daza no hita aty anaty aterineto.
Ara-bakiteny: Tsy mahalàla mpanjaka ny rano – Midika hoe: Ny rano dia afaka mitelina izay rehetra tsy mahay milomano, tsy ijereny ny laharanao ara-tsosialy.
Midika hoe: Mahatonga ny fiainam-piarahamonina ho mahafinaritra ny hehy.
Midika hoe: Raha mitety izao tontolo izao ianao, na dia tsy nahavimbina na inona na inona aza, dia mba nahafantatra zavatra betsaka kosa.
Raha hamaky ohabolana hafa ao amin'ny Twitter, kitiho eto sy eto. Ny bilaogy Maneno Matamu koa dia nanopy maso ny ohabolana tahaka izany avy amin'ireo teny Afrikana samihafa, isan'ireny ny Bambara, izay:
manana ohabolana nadika natao hintsin-dàlana be fotsiny avy amin'ny teny Frantsay, farafaharatsiny araka ny voalazan'ny diksionera anaty aterineto bambara.org :
Ara-bakiteny: « Tsikelikely, mahavita ny tranony ny vorona»
Raha mbola somary saron-kenatra ihany ny teny Bambara ety anivon'ny aterineto, dia efa misy ny fampiasàna azy io eny amin'ny sehatry ny media sosialy. Ohatra i Boukary Konaté, izay mpandrindra rahateo ny tetikasa Ségou Villages Connection, dia manoratra ao amin'ny bilaoginy manokana amin'ny tenimpirenena roa, Frantsay sy ny tenindreniny. Mandefa siokantsera amin'ny teny Bambara ihany koa izy, araka ny hitantsika ato anatin’ireto fifanakalozana niarahana tamin'i Phil Paoletta (@philinthe_) ireto.
Ho an'ireo te-hahalala bebe kokoa mikasika ny Bambara na te-hianatra teny vitsivitsy na fehezanteny, manolotra bokim-pehezanteny ny Wikitravel ary Wikibooks [fr] manolotra bokim-pehezanteny sy lesona ho enti-manomboka [fr]. Misy koa ny diksionera Bambara-Frantsay-Anglisy anaty aterineto .
Azia Atsinanana 10 ora izay
Eoropa Afovoany & Atsinanana 11 ora izay